Hagayaasha Xaafadda: 10 shay oo laga yaabo inaadan ka garanayn Downtown LA
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Hagayaasha Xaafadda: 10 shay oo laga yaabo inaadan ka garanayn Downtown LA
7 min akhris
Labadii sano ee la soo dhaafay, aragtida Downtown Los Angeles si weyn ayay isu beddeshay.
Iyada oo ay ku soo qulqulayaan hudheelo cusub, makhaayado, baararka, iyo dukaamada, qaar badan oo Angelenos ah ayaa ku degdegaya inay booqdaan goobta xaafadda ee kobcaysa ee DTLA, laakiin sidee ku garanaysaa meel aad aaddo? Waxaan u kuur-galnay aagga si aan u ogaano waxa mudan in la hubiyo, oo halkan waxaa ah toban shay oo laga yaabo inaadan ogeyn magaalada hoose ee LA.
Waxaa jira farshaxan dadweyne oo ka badan inta aad u malaynayso.
Isagoo ka hadlaya fanka dadweynaha, Downtown LA waxay leedahay wax ka badan qaybteeda cadaalada ah ee taallooyin iyo taallo taas oo u taagan sidii tilmaan dadka socotada ah. Waxa ugu horreeya ee aad dareento markaad soo gasho Degmada Fanku waa farshaxanka dadweynaha - iyo inay meel walba taal. Bartamaha magaalada waa hanti faneed dadweyne oo laga soo bilaabo sawir gacmeedyada waaweyn ee dhinacyada dhismayaasha ilaa shaqooyinka yar yar ee ku yaal geesaha daaqadaha, kuraasta, iyo albaabada.
Tilmaamaha Muhiimka ah ee DownTownLA
Waxaa jira matxaf dhan (free) oo dhan oo laga heli karo jid-jiideedka.
Waxaa lagu magacaabaa Grand Central Art Center, waxayna ku taal luuqyada u dhexeeya Main iyo Spring Street iyo 2nd iyo 3rd Streets. Aaggu sidoo kale waxaa hoy u ah Shepard Fairey iyo Mark Dean Veca waxaana loogu magac daray "Alley-Oop" fanka dartiis.
Waxa jira farshaxan dhererkiisu yahay 140 cagood oo muraayado ah.
LA Mural waa muraayadaha adduunka ugu rinji ee ugu weyn. Aad ayey u weyn tahay waxaad ka arki kartaa meel mayl u jirta… waxaana lagu rinjiyeeyay dhismaha dhinaciisa, ma aha oo kaliya muraayada dhulka! Artist Robert Vargas waxa uu abuuray 2008.
Waxaad ka heli kartaa qayb macmacaan ah oo ay la socoto koobka kafeega Urth Caffe.
Meel kasta oo magaalada hoose ah waxay leedahay kiis bandhig ah oo ay ka buuxaan daraasiin macmacaan ah iyo macmacaan oo aad iibsan karto ka dib markaad ku raaxaysato cuntadaada. Donuts, croissants, tarts, keega, buskudyada, brownies... haddii aad cuni karto, waxay haystaan ​​iib!
Pixar wuxuu jecel yahay magaalada hoose ee LA!
Filimka xiisaha leh ee "Up" waxaa lagu dejiyay magaalo khayaali ah oo wax badan la mid ah magaalada hoose ee LA oo ay ku jiraan sawirro bannaanka ah oo derbiyada dhismaha ah, guryihii Fiktooriya oo loo beddelay guryo dabaqyo ah, baabuur waddo dad ah oo magaalada ku wareegsan… xitaa guryo leh saqafyo dufan leh oo cas! Filimka waxaa hagayay Pete Docter oo u dhashay LA, kaasoo ku nool taariikhiga ah Angelino Heights oo ka mid ah dhowr guri oo taariikhi ah oo uu u soo iibiyay qoyskiisa ka dib markii uu sameeyay "Monsters Inc.
Downtown LA waxay hoy u tahay tacos kalluun.
Bartamihii 1970-yadii, ganacsade Ralph Rubio waxa uu aagga San Diego ku soo bandhigay taco kalluunkiisa oo ah nooca loo yaqaan Baja-ga ee caanka ah, isla markiiba, makhaayadihiisu waxa ay bilaabeen in ay xadhkaha ku wareegaan hareeraha. Sannadkii 1989-kii, waxa uu makhaayad ka furay Anaheim, 1995-kiina waxa uu yimid Los Angeles. Markii Rubio ee ugu horeysay ee magaalada hoose ee Los Angeles laga furay wadooyinka 9th iyo Hill 1996, waxay noqotay wax ku dhuftay - iyo taabashada dhaqameed.
Bonus: Downtown LA waa degmada ganacsiga ugu mashquulka badan galbeedka Maraykanka, magaalada hoose ee LA waxay leedahay inta ugu badan ee qolalka hoteelka ee Koonfurta California. Xudunta taariikhiga ah ee Downtown LA waxay hoy u tahay qolal hudheelo badan marka loo eego tirada guud ee qolalka San Diego's Hotel Circle, San Francisco's Union Square, ama Seattle's Pike Place Market.
Downtown LA waa guriga asalka ah ee In-N-Out burger. Sannadkii 1948-kii, Harry iyo Esther Snyder waxay u adeegeen macaamiishooda ugu horreeya min 10-stool oo yar oo ku yaal dhismo warshadeed oo bannaan oo Lily Tulip ah oo ku yaal geeska Westlawn iyo La Brea Avenues.
Little Tokyo ma aha qayb ka mid ah magaalada hoose ee LA - inkasta oo ay ku taallo masaafo socod u jirta Saldhigga Ururka iyo Degmada Maaliyadda, Little Tokyo waa xaafadeeda yar. Waa qayb ka mid ah Xarunta Adeegyada Yaryar ee Tokyo, Inc., oo ah urur gaar ah oo aan faa'iido doon ahayn. Xarunta dhaqameed ee maanta loo yaqaan Little Tokyo waxaa asal ahaan la aasaasay 1887 iyada oo ah meel u dhow muwaadiniinta Japan ee ka soo haajiray Japan oo mar hoy u ahayd Japantown horumarsan. Sannadkii 1909kii, beesha waxa loo beddelay East Los Angeles, 1931-kiina waxa loo yaqaannay Little Tokyo. Sannadkii 1942-kii, iyadoo la raacayo Internment of Japanese Americans, bulshada ayaa mar kale loo magacaabay in loo yaqaan Boyle Heights.
Hoolka riwaayadaha ee Disney waa hoyga LA Philharmonic - mid ka mid ah orchestra-yada ugu caansan Adduunka, taas oo macnaheedu yahay haddii aad raadinayso inaad aragto qaar ka mid ah fannaaniinta A-List ee soo galaya magaalada, tani waa mid ka mid ah dhibcaha ay tahay inaad isha ku hayso.
Waddada 10-ka bilaashka ah kuma dhammaanayso badhtamaha magaalada - Haddii aad si uun u maareyso inaad seegto tobanka waddo ee xorta ah ee aad ku sii socoto magaalada hoose ee LA, waxaad raaci kartaa Alameda St woqooyi halka ay ku xidho shanta waddo ee xorta ah ee kugu celin doonta meel ka baxsan magaalada hoose.
Dhismaha Bradbury wuxuu ahaan jiray meel meydadka la dhigo. Ka hor dib-u-habeeyayaasha ayaa ka badbaadiyay dhismahan taariikhiga ah in la dumiyo, waxa ay u noqotay meel meydadka lagu keydiyo oo sugaya aqoonsi dowladeed ama baaritaanno kadib markii lagala baxay xabsiga booliiska.
Laba buundo ayaa ku teedsan webiga LA.
The Los Angeles Downtown News waxay soo warisay in buundada First Street ay dib u dhacday 1913kii. Buundada ayaa loo isticmaalay albaab laga galo tareenada xamuulka si ay agabka ugu geeyaan bakhaarrada u dhow webiga. Buundadan ilaa maanta waa la isticmaalaa waxayna isku xirtaa Degmada Fanka iyo Tokyo yar. Buundada labaad, oo loo yaqaan buundada Sixth Street, ayaa la furay 1926-kii, iyo biyo mareenadii hore ee Roomaanka ayaa dhiirigeliyay dhismaheeda.
U dhow wadamada badankood
LAX waa mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee ugu dhow wadamada badankooda (kuma jiraan Mexico) ee aduunka, taasoo sahlaysa in dibada loogu safro qiimo jaban.
Downtown LA waxay leedahay nolol habeenimo oo heersare ah.
Downtown LA waxay leedahay nolosha habeenkii ugu fiican magaalada. Noocyada kala duwan ee baararka iyo naadiyada waxay la macno tahay in had iyo jeer ay jiraan wax laga soo xusho, haddii aad ku jirto niyadda xaflad qoob ka ciyaar madadaalo leh ama meel qabow oo aad saaxiibo la joogto. Downtown LA sidoo kale waxay ku fiican tahay cabitaanka maalinlaha ah.
Wax qarsoodi ah maaha in Downtown LA ay hoy u tahay qaar ka mid ah makhaayadaha ugu fiican magaalada. Waa maxay meesha ugu fiican ee cabitaanka maalintii? Waxaad ku raaxaysan kartaa biirka farsamada ama khamriga maxaliga ah qadada ama brunch ka dibna u bixi cocktails habeenkii.
Tifatiraha guud waa Linda Hohnholz.